Magaalaa Gincii (Shawaa Lixaa) nama 45 bakka buuteen isaa hin beekkamu – Welcome to bilisummaa
Magaalaa Gincii (Shawaa Lixaa) nama 45 bakka buuteen isaa hin beekkamu
Kan agartan kun hidhamtoota siyaasaa magaalaa Gincii ( Shawaa Lixaa) keessaa hamma tokko yeroo mana murtiitti geeffamani. Magaalaa kana keessaa namni 45 ta’u bakka buuteen isaa hin beekkamu. Tarii gara Maakkalaawii geessaman jedhamee shakkama. Akkuma yaadattan Ginci bakka fincilli ammaa kun Sadaasa 12, 2015 itti dhooye ta’uun ni yaadatama.
Previous Letter to ESAT TV Concerning New Afaan Oromoo Program To Start.
Next Kaleessarraa kaasee naannoo Waddeess ( Aanaa Amboo) keessatti lolli cimaan deemsifmaa akka jiru odeeffanoon nu gahaa jira.